China Flocking Rubber Akara ụlọ ọrụ na-emepụta | Tianzheng
Usoro etu a si eme ya bụ ọkachasị bụ ịme ụlọ, ịrọ ihe, ịjụ oyi na ịgwọ ọrịa. Mgbe ọ gwọchara ya, eriri nrapado ga-ehichapụ elu mmiri na-ese n'elu mmiri, wee bepụ ya na nha ụfọdụ, tinye ya n'ime igbe mkpọ, ma lelee ya maka nchekwa, nnyefe ma ọ bụ nkwakọ ngwaahịa ọzọ.
Ihe onwunwe EPDM
Ekweghị ekwe 65shore A ruo 80 shore A
Njupụta 1.35g / cm3
Ike ọdụdọ > = 7Mpa
Ngwugwu ebipụ ruo ogologo oge ma ọ bụ dịka ịchọrọ
Elu-edu ihe na rụpụta.
Ọtụtụ aghụghọ ịhọrọ site na.
Na-egbochi ájá na ihu igwe.
Mfe echichi na mmezi.
Enwere ike gbanwee ya iji dabaa ngwa gị.
N'ime ụgbọ ala, a na-eji rubbers ndị nwere atụrụ maka ibo ụzọ, windo elu ụlọ nke anwụ. N'ebe a, ha na-arụ ọrụ abụọ: akara aka na ahụ na nkwado nke imeghe na mmechi ọrụ na ikike dị ala. Enwere ike ịkọwapụta teknụzụ bara uru nke igbanye n'ụdị site na iji ihe atụ nke windo ụgbọ ala. Ngagharị nke otu iko enyo n’elu profaịlụ roba chọrọ ntinye nke ike dịtụ elu. N'usoro iwu esemokwu, a kọwara ike esemokwu a dị ka ọnụọgụ nke esemokwu. N'ihe banyere iko / roba, nke a karịrị 1. ckinggbachi roba nwere ike belata ọnụọgụ nke esemokwu na 0.25-0.3
Ntughari nke profaịlụ vulcanized na usoro na-aga n'ihu bụ usoro kachasị mma. Mgbe extrusion, profaịlụ na-vulcanized na a UHF ọwa na-ekpo ọkụ ikuku ọwa. A na-etinye nrapado ahụ n'elu mgbe ọ dị jụụ ruo ihe dị ka 110`C ma mee ka ọ dị mma. Nke a na-esote site na ịgwakọta ma gwọọ nke nrapado na ihe dị ka 170`C maka nkeji 2-3.
Nke gara aga: Edge Nchedo Akara
Osote: Amfụfụ Rubber warara na nrapado Mezie
Na-agbachi Rubber Seals